“Kiyi dzeUmambo” Chii? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Turkish Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Kiyi dzeUmambo” Chii?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa “Kiyi dzeUmambo” Chii?
“Kiyi dzeUmambo,” dzinomiririra simba rekupa vanhu mukana wekuti ‘vapinde muUmambo hwaMwari.’ (Mateu 16:19; Mabasa 14:22) * Jesu akapa Petro “kiyi dzeUmambo hwekumatenga.” Izvi zvinoreva kuti Petro akasarudzwa kuti aratidze kuti vanhu vakatendeka vanogona kupinda muUmambo hwekumatenga, kana vakagamuchira mweya mutsvene waMwari.
Kiyi dzacho dzakashandiswa kuvanhu vapi?.
Petro akashandisa simba raakapiwa naMwari kuti ape mapoka matatu evanhu mukana wekupinda muUmambo:
VaJudha uye vanhu vakatendeuka kuti vabatane nevaJudha. Nguva pfupi Jesu afa, Petro akakurudzira vatendi vechiJudha kuti vagamuchire Jesu saMambo akasarudzwa naMwari. Petro akavaudza zvavaifanira kuita kuti vaponeswe. Izvi zvakavapa mukana wekuti vapinde muUmambo, uye zviuru zvevanhu ‘zvakagamuchira shoko rake.’​—Mabasa 2:38-41.
VaSamariya. Nekufamba kwenguva Petro akazotumwa kuvaSamariya. * Akashandisazve imwe kiyi yeUmambo paaiva naJohani, ‘pavakanyengeterera vaSamariya kuti vawane mweya mutsvene.’ (Mabasa 8:14-17) Izvi zvakaita kuti vaSamariya vakwanise kupinda muUmambo.
Vemamwe Marudzi. Pashure pemakore matatu nehafu Jesu afa, Mwari akaudza Petro kuti vanhu vemamwe marudzi, kureva vanhu vasiri vaJudha, vaizowanawo mukana wekupinda muUmambo. Petro akashandisa imwe kiyi nekuparidzira vanhu ava. Izvi zvakaita kuti vagamuchire mweya mutsvene, vachibva vava vaKristu uye zvakavapa mukana wekupindawo muUmambo.—Mabasa 10:30-35, 44, 45.
Zvinorevei “kupinda muUmambo”?
Vanhu ‘vanopinda muUmambo’ vachatonga naJesu kudenga. Bhaibheri rinoti ‘vachagara pazvigaro zveumambo’ uye ‘vachatonga nyika semadzimambo.’​—Ruka 22:29, 30; Zvakazarurwa 5:9, 10.
Nhema dzinotaurwa nevamwe nezvekiyi dzeUmambo
Zvavanotaura: Petro ndiye anosarudza kuti ndiani achapinda denga.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Bhaibheri rinoti Kristu Jesu, ndiye “achatonga vapenyu nevakafa.” (2 Timoti 4:1, 8; Johani 5:22) Petro pachake akati Jesu “ndiye akagadzwa naMwari kuti ave mutongi wevapenyu nevakafa.”—Mabasa 10:34, 42.
Zvimwe zvinotaurwa nevanhu: Denga raitomirira Petro kuti atange asarudza kuti oshandisa riini kiyi dzeUmambo.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Jesu paaitaura nezvekiyi dzeUmambo, akaudza Petro kuti: “Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika, chichasungwa kudenga, nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika, chichasunungurwa kudenga.” (Mateu 16:19, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Vamwe pavanoverenga vhesi iyi, vanobva vafunga kuti Petro aiva nesimba rekuti zvaaisarudza ndizvo zvaizoitwa kudenga. Asi mashoko echiGiriki akashandiswa pavhesi iyi anoratidza kuti Petro aiita zvinhu zvainge zvatosarudzwa kare kudenga.
Bhaibheri rinotiudza kuti Petro aitomirira kuudzwa naMwari kuti oshandisa riini kiyi dzeUmambo. Semuenzaniso, paakashandisa kiyi yechitatu, akanga achiita zvaakanga atoudzwa naMwari.​—Mabasa 10:19, 20.
^ ndima 3 Pane dzimwe nguva, Bhaibheri rinoshandisa shoko rekuti “kiyi” richireva simba kana kuti basa.​—Isaya 22:20-22; Zvakazarurwa 3:7, 8.
^ ndima 7 Chitendero chevaSamariya chakanga chakasiyana nechechiJudha, asi zvimwe zvavaidzidzisa uye zvavaiita zvaibva muMutemo waMosesi.
Umambo hwaMwari Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Ndivanaani Vanoenda Kudenga?
Vakawanda vanofunga kuti vanhu vese vakanaka vachaenda kudenga. Bhaibheri rinombodzidzisei chaizvo?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Kiyi dzeUmambo” Chii?
Mwanakomana Womunhu Ndiani?